Global Aawaj | विदेशमा हन्डर, फर्किएर भट्टामा विदेशमा हन्डर, फर्किएर भट्टामा
विदेशमा हन्डर, फर्किएर भट्टामा
महोत्तरी । गौशाला–१० भरतपुरका ३९ वर्षीय जुलमी मुखिया धन कमाउन भनेर ६ वर्षअघि मलेसिया उडेका थिए। तर, वैदेशिक रोजगारीको कमाइले ‘गरिबको बिल्ला’ फेर्ने उनको सपना अधुरै रह्यो। त्यसमाथि विदेश जाँदा लागेको ऋणको बोझले थिचेको छ। उनले तीन लाख ऋण चुक्ता गर्नु त छँदै छ, साँझबिहान हातमुख पनि जोर्नु छ। त्यही भएर उनी अहिले गाउँकै बाबा इँटा उद्योगमाश्रम बेचिरहेका छन्।
‘महाजनबाट १ लाख ३० हजार ऋण लिएर एजेन्टलाई दिएँ। त्यसपछि उसले मलेसिया उडायो। तीन वर्षपछि काम गर्दैगर्दा दाहिने खुट्टा भाँचियो। ठूलो दशा लाग्यो’, उनले भने, ‘त्यहाँ काम गर्नै सकिनँ अनि फर्केर आएँ। खुट्टाको उपचारमै दुई लाख खर्च भयो। पछि आएर बूढीऔंलामा भित्रबाट घाउजस्तो देखापर्‍यो। खुट्टा फुलियो। जँचाउँदा कुष्ठरोग देखियो। एक वर्ष औषधि खाएँ। बल्ल ठीक भएको छु।’
विदेशमा कमाइ गर्दा उनले छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउँथे। आम्दानी गुमेपछि सरकारीमा पढाइरहनुपरेको छ। ‘महाजनको ऋण कहाँबाट चुक्ता गर्ने ? छोराछोरीलाई कापीकिताब केले किन्ने ? लत्ताकपडा कहाँबाट लिएर आउने ?’, उनले दुःखेसो पोखे, ‘त्यसका लागि काम त गर्नै पर्छ। दुःख जति खेप्नुपरे पनि इमानदारीमै बाँच्छु।’
इँटाभट्टामा उनी मात्र होइन, उनका नाबालक छोराहरू १० र १२ वर्षका सुजित र अमित पनि काम गर्छन्। ‘दुःखलाई जित्न विदेश गएँ। तर, त्यहाँबाट हारेरै फर्किनुपर्‍यो। अहिले इँटा बनाउने काम गर्दै छु’, उनले भने, ‘भनेअनुसार काम विदेशमा नदिएर एजेन्टले ठग्यो। खुट्टा टुटेपछि भाग्यले पनि छल्यो।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
विद्युत् महसुल, कृषि कर्जा र कृषि सामग्रीमा अनुदान दुर्गाफाटमा चौथों पाणिनी दुर्वाशेश्वर पर्यटन महोत्सव हुने बुद्धएयरले जनकपुर-अयोध्यामा उडान गर्ने ‘आपराधिक घटना परिवार र आफन्तबाटै’ गुरुकुलका विद्यार्थीलाई अवलोकन भ्रमण गराइने मल आपूर्ति तथ्य र आवश्यकताका आधारमा गरिने छ: कृषिमन्त्री थाहा नगरपालिकामा ८० प्रतिशत निजी आवास पुन:निर्माण बलात्कार आरोपित पक्राउ यौन प्रकरणका कारण भारतका एक मन्त्रीद्वारा राजीनामा जब ताज महलमा बम राखिएको छ भन्दै प्रहरीलाई फोन आयो… ‘आगलागी नियन्त्रण गर्ने छुट्टै योजना छैन’ पोखरामा ४० वर्षमाथिको भेट्रान फुटबल प्रतियोगिता हुने आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै कांग्रेस सरकारमा जान्छ: डा. महत ट्रकले ओभरटेक गर्न खोज्दा दुर्घटना भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ : अध्यक्ष ज्ञवाली जग्गाधनी पुर्जा पाउँदा औधि खुशी उद्योगमैत्री कानून बनाइने छ : मन्त्री श्रेष्ठ अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा तिलोत्तमाको प्रशासनिक भवनको उद्धघाटन करेन्ट लागेर किशोरको मृत्यु हटाउन नसक्ने भएपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता : बस्नेत